२० असार २०७७, शनिबार ०७:००
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन् । शीर्ष नेताहरूको कटुतासँगै नेकपाका कार्यकर्तामाझ एउटा चिन्ता गढेको छ– कतै एकता भत्किने त होइन ? नेकपा फेरि फुट्ने त होइन ? मेलमिलापको अपेक्षासहित दुई अध्यक्ष एक–एक विश्वासपात्रसहित शुक्रबार तीन घण्टा बसे।
‘दुई अध्यक्षबीच खुलेरै कुराकानी भएको छ’, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा सँगै रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र महासचिव विष्णु पौडेल पनि थिए ।
ओलीसँगको बालुवाटार छलफलबारे दाहालले आफ्नो निवासमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर शुक्रबार साँझ जानकारी गराएका छन्। त्यहाँ सहभागी एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, ओली शुक्रबारको छलफलमा पनि आफ्नो अडानमा यथावत् छन्। अडानमै प्रधानमन्त्री रहेका छन् । अब स्थायी समितिबाटै कोर्स अगाडि बढ्छ।’
दाहालले परिस्थिति त्यसभन्दा धेरै अगाडि गएकोले विगतका सहमति, सम्झौतामा मात्र अब नअड्किने धारणा राखेका थिए। तर त्यसमा ओली सहमत देखिएका छैनन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।